राष्ट्र बैंकले माग्यो पुनर्कर्जाको आवेदन, कुन-कुन व्यवसायीले पाउँछन्?
काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकले कोरोना भाइरसको महामारीबाट प्रभावित बनेको व्यवसाय/व्यवसायीसँग पुनर्कर्जाको आवेदन मागेको छ। राष्ट्र बैंकले कोभिड-१९ महामारीबाट प्रभावित व्यवसायीलक्षित दोस्रोपटक पुनर्कर्जा आवेदन माग गरेको हो।
केन्द्रीय बैंकले आज एक सूचना जारी गर्दै माघ १७ गतेसम्म आवेदन दिन सक्ने जानकारी दिएको छ। ‘नेपाल राष्ट्र बैंक पुनर्कर्जा, २०७७’ अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थासमक्ष पुनर्कर्जाको आवेदन माग गरेको हो।
केन्द्रीय बैंकले यसअघि भदौ दोस्रो सातादेखि असोज मसान्तसम्म आवेदन माग गरेको पुनर्कर्जा स्वीकृत गरिसकेको छ। पुनर्कर्जाको स्रोत एक खर्ब ४८ अर्ब रूपैयाँमध्ये अघिल्लो आवदेनमार्फत् ५० अर्ब ७ करोडको पुनर्कर्जा स्वीकृत भइसकेको छ।
त्यसमध्ये बाँकी ९८ अर्ब रूपैयाँ पुनर्कर्जाको लागि दोस्रोपटक आवेदन मागिएको हो। आवेदकले धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएको भए पनि कुनै एउटा बैंकबाट मात्रै पुनर्कर्जाका लागि आवेदन गरेको हुनुपर्नेछ।
व्यवसायीहरूले आफूले सेवा लिइरहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखामा पुनर्कर्जाको आवेदन दिन सक्नेछन्।
कुन-कुन व्यवसायीले पाउँछन् पुनर्कर्जा?
राष्ट्र बैंकले बताएअनुसार कोरोना भाइरसको महामारीबाट अति र मध्यम प्रभावित व्यवसायीले पुनर्कर्जा पाउँछन्। यसअनुसार पर्यटनसम्बन्धी सम्पूर्ण व्यवसायी, साहसिक पर्यटन, खेलकुद पर्यटन, सिनेमा क्षेत्र तथा अन्य प्रकारका व्यवसायीले पुनर्कर्जा पाउँछन्।
यसै गरी, पुष्प व्यवसायी, कुखुरापालन, माछापालन, तयारी पोशाक, वैदेशिक रोजगार सेवा प्रदायकलगायतले पनि पुनर्कर्जा पाउनेछन्। यस्तै, निर्माण सामाग्री उत्पादन तथा बिक्री वितरण व्यवसायी, औषधी उत्पादन, ब्यूटी पार्लर, सार्वजनिक यातायात, छपाइसम्बन्धी र स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रले समेत पुनर्कर्जा पाउँछन्।
अर्थतन्‍त्र बैँक / वित्त
प्रकाशित: शुक्रबार, पुस १७, २०७७ १४:२५
राष्ट्र बैंकले आज एक सूचना निकाल्दै ‘नेपाल राष्ट्र बैंक पुनर्कर्जा, २०७७’ अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थासमक्ष पुर्नकर्जाको आवेदन माग गरेको हो।
पुनर्कर्जाको स्रोत एक खर्ब ४८ अर्ब रूपैयाँमध्ये अघिल्लो आवदेनमार्फत् ५० अर्ब ७ करोडको पुनर्कर्जा स्वीकृत भइसकेको छ।
कोभिड-१९ बाट अति र मध्यम प्रभावित सम्पूर्ण व्यवसाय र व्यवसायीले पुनर्कर्जा पाउँछन्।